Faah faahin Dilal ka dhacay Hargeysa | Baydhabo Online
Faah faahin Dilal ka dhacay Hargeysa
Magaalada Hargeysa ee xarunta Maamulka Soomaaliland xalay waxaa lagu dilay 4 Qof, waxaana dilalkaasi fuliyay kooxo hubeysan.
Dilalkan oo mid ka mid ah uu ka dhacay bartamaha Magaalada Hargeysa ayaa waxaa fuliyay Askari ka tirsan Ciidanka Soomaailand, kaas oo dil u geystay Nin ganacsade ah oo lagu magacaabi jiray Aadan Faarax.
C/raxmaan Liibaan Fooxle oo ah Taliye ku xigeenka Ciidanka Booliska Maamulka Soomaaliland ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in gacanta ay ku hayaan rag dilal kala duwan Magaalada Hargeysa uga fuliyay.
Sidoo kale Taliye ku xigeenka Ciidanka Booliska Maamulka Soomaaliland C/raxmaan Liibaan Fooxle ayaa sheegay in ay qabteen Askari ka tirsan Ciidanka Soomaaliland oo dil geystay, sidoo kalena ay wadaan baaritaano dheeraad ah.
Xaalada Magaalada Hargeysa ayaa saakay degan, waxaana Ciidanka Maamulka Soomaaliland ay howlgallo ka wadaan gudaha Magaalada Hargeysa.